किन कोइनबेस को Bitcoin नेटवर्क अधिक भार आरोप छ र कसरी काम SegWit ? - Blockchain समाचार
फेब्रुअरी 12, 2018 व्यवस्थापक
किन कोइनबेस को Bitcoin नेटवर्क अधिक भार आरोप छ र कसरी काम SegWit ?
र धेरै कोइनबेस ईन्जिनियरहरु SegWit परिचय आवश्यक कसरी.
फेब्रुअरी मा 5, को कोइनबेस Cryptocurrency विनिमय एक Tweet राखिएको, जानकारी छ कि “विकास टोली परीक्षणको अन्तिम चरण मा छ SegWit”, र “SegWit समर्थन संग पठाउने र प्राप्त bitcoins केही हप्ता मा उपलब्ध हुनेछ”.
कोइनबेस गत वर्ष प्रारम्भिक डिसेम्बरमा SegWit मा काम घोषणा, प्रयोगकर्ता देखि प्राय: सोधिने प्रश्नहरू एक जवाफ “कति कोइनबेस ईन्जिनियरहरु SegWit परिचय आवश्यक छ।”
डिसेम्बर मा 16, कोइनबेस उपाध्यक्ष-अध्यक्ष दान Romero आधिकारिक कोइनबेस ब्लग मा एउटा पोस्ट प्रकाशित, SegWit को परिचय को लागि योजना बनाए छ जानकारी 2018, र क्षणमा टोलीमा छ “SegWit को सुरक्षित कार्यान्वयन काम।” Romero जोड कि “प्राथमिकता मा – सुरक्षा र विनिमय को कुशल काम”, र बारेमा विशिष्ट सर्तहरू बोल्न छैन.
तथापि, को डिसेम्बर लहर मा “Bitcoin उन्माद”, प्रयोगकर्ता असंतोष सञ्जालको busyness संग वृद्धि: आदानप्रदान, कोइनबेस र GDAX सहित, छैन रेकर्ड मांग सामना गर्न सक्षम थिए र अफलाइन भयो, शुल्क र कारोबार पुष्टि समय वृद्धि थिए. मध्य-जनवरी मा, ग्राहकहरु भन्दा बढी संकलन गर्ने एक आवेदन पठाएको कोइनबेस सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग 12,000 हस्ताक्षर, को लागि एक प्राथमिकता रूपमा SegWit लागि समर्थन लागि कल 2018. Jameson रेस, को BitGo गुप्त वालेट को अग्रणी इन्जिनियर, कोइनबेस सेवाहरूको परित्याग लागि भनिन्छ: “यो Bitcoin नेटवर्क मा overloads छ को एक महत्वपूर्ण कारण Blockchain.info जस्ता लोकप्रिय सेवाहरू कारण छ कि एक खोज छैन, कोइनबेस र मिथुन, जो inefficiently ब्लक ठाउँ प्रयोग. तपाईं यो योगदान गर्न चाहनुहुन्छ भने, यसलाई प्रयोग नगर्नुहोस्. ” आर्मस्ट्रांग फेरि शुल्क प्रतिक्रिया, भन्दै “कोइनबेस packetizing लेनदेन मा काम गरिरहेको छ, SegWit र अन्य रणनीति को एक नम्बर नेटवर्क मा ठहराव हटाउन।”
SegWit लेनदेनको आकार घटाउने द्वारा scalability समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ. प्रोटोकल Blockstream पत्रुस Wellle विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित भएको थियो, र softphone कि SegWit प्रयोग सम्भव, गत वर्ष अगस्ट मा नेटवर्क Bitcoin मा भयो. पहिले नै प्रविधि समर्थन सेवाहरू बीचमा – पर्स लेजर, सुरक्षित, Electrum र Samourai वालेट, साथै गुप्त-आदानप्रदान रूपमा HitBTC, ShapeShift र Bitstamp. SegWit को Bitcoin नेटवर्क मदत बुझ्न क्रममा, यो सरल स्तरमा को रूप मा Bitcoin नेटवर्क मार्फत यात्रा गर्ने Bitcoin-लेनदेन को दैनिक दिनचर्या कल्पना गर्न आवश्यक छ “जानकारी प्याकेटहरू”, र आफ्नो प्रामाणिकता र शुद्धता नोड्स द्वारा जाँच गरिन्छ. सबै नोड्स लेनदेन सही छ भनेर सहमत हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि सहमति पुगेको छ. लेनदेन नै दुई भागहरु हुन्छन्: इनपुट र आउटपुट – “इनपुट” र “बाहिर निस्कन”, जो बाट पहिलो भाग लागि जिम्मेवार छ “अनलक”, छ, bitcoins प्राप्त (र प्रेषकलाई बारेमा जानकारी समावेश), र दोस्रो – लागि “ताला” संभावित भविष्य ढुवानी लागि. इनपुट डाटा पनि निजी र सार्वजनिक कुञ्जी को पत्राचार certifying एक हस्ताक्षर समावेश.
SegWit प्रविधि (अलग साक्षी) दुई भागमा लेनदेन राइट्स र हस्ताक्षर स्थान्तरण (“साक्षी”) आवश्यक गर्न “अनलक” को प्राप्त bitcoins, लेनदेन को अन्त गर्न, मुख्य बाहिर बन्देज. यस मामला मा, मुख्य एकाइ प्राप्तकर्ता र प्रेषकलाई डेटा समावेश, र “साक्षी” लिपि र हस्ताक्षर समावेश, छ, आवश्यक छ भन्ने जानकारी लेनदेन पुष्टि गर्न, तर त्यसपछि कहिल्यै प्रयोग गरिनेछ. को हस्ताक्षर बारेमा कब्जा गर्ने खातामा लिइरहेको 60% लेनदेन मात्रा को, आफ्नो अलग्गै एकदम ब्लक आकार कम, जसबाट नेटवर्क ब्यान्डविथ वृद्धि र कारोबार रकमको लागत कम.
किन्न, बेच्न, what should be done...
अघिल्लो पोस्ट:Coincheck घोषणा फिर्ती अर्को हप्ता सुरु
अर्को पोस्ट:मारियो Draghi: Bitcoin विनियमन ECB जिम्मेवारी छैन
these details भन्छन्:
सक्छ 3, 2018 मा 7:15 AM